आमाले सबैको ठाउ लिन सक्छीन तर एउटी आमाको ठाउ कसैले लिन सक्दैन ! « Bagmati Online
आमाले सबैको ठाउ लिन सक्छीन तर एउटी आमाको ठाउ कसैले लिन सक्दैन !
आमा, जो कसैकी छोरी हुन सक्छिन् । कसैकी श्रीमति हुन सक्छिन् । कसैकी बुहारी हुन सक्छिन् । कसैकी भाउजु हुन सक्छिन् । यी अनेक भूमिकाभित्र बाँच्नुपर्ने हुन्छ, आमाले । र, यी सबै भूमिकालाई उत्तिकै कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अक्सर हाम्रो पारिवारिक संरचना अनुसार घर-परिवार धान्ने जिम्मा आमाको हुन्छ । हुन त आधुनिक समाजमा लैंगिक समानताको कुराले पनि महत्व पाएको छ । पति-पत्नीको भूमिका, महत्व र स्थान सराबरी हुने तर्क छ । भलै कर्य-व्यवहारको हिसाबले लैंगिक समानताको कुरा सही मान्न सकिएला । तर, आमासँग परिवारको जुन किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, त्यस हिसाबले आमाको जिम्मेवारी र भूमिका अलि बढी नै हुन्छ । परिवारलाई एउटा सूत्रमा बाँधेर राख्ने ताकत परिवारका अरु सदस्यसँग हुँदैन । किनभने, आमा भनेकी आस्था हुन् । आदर्श हुन् । विश्वास हुन् । त्यसैले समग्र परिवारलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने भन्ने कुरामा आमाले अहंम भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन् ।
परिवारलाई कसरी सुखी राख्ने भन्ने कुरा आमाकै हातमा हुन्छ । हुन त हरेक सन्तानलाई आमाले नियन्त्रण वा निर्देशन गर्न सक्छ भन्ने होइन । यद्यपी समग्र परिवारको लय वा तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा आमाले खास भूमिका खेल्न सक्छिन् । परिवारका सदस्यहरुलाई कसरी न्यायोचित ढंगले स्थान दिने, आपसी सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने कुरामा आमाको भूमिका रहन्छ । किनभने, पारिवारिक जीवनमा अनेक उतार-चढाव आउँछ । मनमुटाव हुन्छ । रिस-राग पैदा हुन्छ । यी मानविय गुण हुन् । स्वभाविक र सामान्य कुरा हुन् । तर, सानातिना असमझदारी, मनमुटावले परिवारिक संरचना विथोल्न सक्छ । आफु-आफुमा फाटो ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि आमा नै न्यायमूर्तिको भूमिकामा रहने गर्छिन्/रहनु पर्छ ।
समग्र परिवारको स्वास्थ्यमा आमाको खास भूमिका हुन्छ । त्यही आमा हुन्, जसले बाल्यकालमा तेलले मालिस गरेर हाम्रो मांसपेशी बलियो बनाइदिइन् । त्यही आमा हुन्, जसले पोषिलो खानेकुरा ख्वाएर हामीलाई पालन-पोषण गरिन् । कुनैपनि घर-परिवारको खान्कीमा आमाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्छिन् । आफ्नो भान्समा के पकाउने, कसरी पकाउने भन्ने कुरा आमाकै हातमा हुन्छ । रोग-कष्टमा कस्तो निदान खोज्ने भन्ने कुरामा पनि आमाको अनुभव काम लाग्छ ।